ओलीले नवराज सिलवाललाई गृहमन्त्री बनाउलान् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ४ मंसिर । डिआइजी हुँदा वरियतामा पहिलो भएपनि आइजीपी बन्न नपाएका नवराज सिलवाललाई तत्कालिन नेकपा एमालेले पार्टीमा भित्रायो । सेलिब्रिटी तत्कालिन प्रहरी अधिकृत सिलवालप्रति धेरैको सहानुभूती बढ्यो ।
सिलवाललाई आइजीपी बन्न रोकेको आरोप काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि लाग्यो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवालकै पक्षमा थिए । तर, देउवाको अडानका सामु उनको केही जोर चलेन ।
सिलवाल मुद्दा मामलामा लागे । आइजीपी प्रकरण पेचिलो बन्यो । देशको राजनीतिमा समेत यो घटनाले दुरगामी असर पार्यो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि महाभियोगको कारण बन्यो । अदालत देखि राजनीतिसम्म असर पारेको घटनाको लाभ तत्कालिन नेकपा एमालेले लियो ।
सिलवाललाई पार्टीमा टीका लगाएर केपी शर्मा ओलीले भित्राए । सार्वजनिक रुपमा गृहमन्त्री बनाउँछु भने । ललितपुर स्थायी घर भएका सिलवाललाई क्षेत्र नम्बर १ बाट टिकट समेत दिए । ललितपुरको राजनीतिमा लामो योगदान गरेका तत्कालिन एमाले नेताहरुलाई पाखा लगाउँदै टिकट दिइएको थियो ।
सिलवाल प्रहरी सेवाबाट एकैपटक राजनीतिमा हामफालेर राज्यमन्त्री भइसकेका उदय शमशेर राणालाई पराजित गरे । राणा कुनैबेला सिलवाललाई आइजीपी बनाउने पक्षमा लबिङ गर्नेमा पर्थे ।
सिलवाल सांसद जित्नुमा उनीप्रतिको सहानुभूती मुख्य कारण थियो । काठमाडौ उपत्यका र आसपासका जिल्लाहरुमा काँग्रेसको धेरै मत घट्नुमा आइजीपी प्रकरण थियो । त्यसमा नवराज सिलवाल मुख्य पात्र थिए । तत्कालिन एमालेलाई राम्रो मत दिलाउन योगदान गरेका सिलवाल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गृहमन्त्री बन्ने हल्ला चल्यो । तर, ओलीले उनलाई सहायकमन्त्री सम्म बनाएनन् ।
ओलीले आजै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसपटक उनले नवराज सिलवाललाई मन्त्री बनाउलान् कि नबनाउलान् चासोको विषय बनेको छ । ओलीको बोली कार्यान्वयन हुने हो होइन ? यो प्रश्न फेरि तेर्सिएको छ । File Photo